Fifidianana Solombavam-bahoaka Tanzania 2015: Faharesena Ho An’ilay Antoko Naharitra Ela Indrindra Teo Amin’ny Fitondrana Aty Afrika ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2015 5:16 GMT
Hahaongotra ny antoko eo amin'ny fitondrana ve i Edward Lowassa, Praiminisitra Tanzaniana teo aloha sady mpifaninana ho fidiana ho filoha avy amin'ny antoko mpanohitra matanjaka ? Sary avy amin'i TZA One ary nampiasàna ny Creative Commons.
Ho fifidianana miady indrindra eo amin'ny tantaran'i Tanzania ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 30 Oktobra hatramin'ny nisian'ny antoko politika maro tamin'ny 1992. Izany dia noho ny fivoarana tampoka na firaisana tsikombakomba efa hita taratra amin'ny politika anatin'ny firenena, izay efa ahitana ny fisintahan'ireo olona ambony vitsivitsy teo amin'ny fitondrana ho any amin'ny antoko mpanohitra matanjaka, ny Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema), avy amin'ny Chama Cha Mapinduzi (CCM).
Samy niala tao amin'ny antoko tsara toerana eo amin'ny fitondrana tamin'ity fahavaratra ity ireo Praiminisitra teo aloha anankiroa, dia i Edward Lowassa, ilay mpihazakazaka ho fidiana ho filoha avy amin'ny vondron'ny mpanohitra Ukawa, ( fikambanan'ny antoko politika efatra, isan'izany ny Chadema) sy i Frederick Sumaye. Niala tamin'ny faran'ny volana Jolay i Lowassa, ilay mamim-bahoaka sy mahasarika olona, rehefa nesorina tsy ho isan'ny mpihazakazaka ho fidiana ho filoha tao amin'ny lisitry ny CCM.
Nanam-bintana ny hanorotoro ny CCM ny antoko mpanohitra misy ireo olona ambony nisintaka. Antoko naharitra indrindra teo amin'ny fitondrana aty Afrika nandritra ny 51 taona ny CCM.
Ambaran'i Chadema Freeman Mbowe, Filohan'ny antoko mpanohitra, ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Huffington Post fa ny tahotry ny CCM ho resy no nahatonga ilay antoko sy ny governemantany hiroso amin'ny fitondrana jadona mba hijanonany eo amin'ny fitondrana :
Matahotry ny ho resy, dia miroso amin'ny fomba tsy demokratika mba hijanonana eo amin'ny fitondrana ny antoko eo amin'ny fitondrana. Voalohany, nanao lalàna henjana momba ny fandaniana amin'ny fifidianana ry zareo, 90 andro mialoha ny datim-pifidianana, izay mandràra ny fanafarana ireo fitaovana rehetra fitondra amin'ny fampielezan-kevitra, ao anatin'izany ny saina, ny fiara ary ny vola. Nitontona telo herinandro mialoha ny andro filazana amin'ny fomba ôfisialy ny antoko mandray anjara io daty farany io. Ahoana moa no hahafahan'ny mpihazakazaka ho fidiana hividy fitaovana mialoha ny hahalalàny fa isan'ny mpifaninana ôfisialy izy ?
Tamin'ny Alatsinainy, nosamborin'ny mpitandro filaminana ireo tanora Chadema 19 izay nirotsaka ho mpanohana. Voasambotra noho ny hetsika tsotra, fanentanam-bahoaka izy ireo. Voasambotra ihany koa ny Minisitry ny Atitany teo aloha, Lawrence Masha, rehefa nandeha tany amin'ny biraon'ny polisy hangataka ny hamotsorana azy ireo.
Ny ampitso, namoaka didy ny mpitandro filaminana fa tsy mahazo mihaona amin'ny vahoaka i Lowassa mpihazakazakay. Tohina tamin'ny fandraisan'ny vahoaka ilay Praiminisitra teo aloha ny CCM rehefa nitaingina fiara fitateram-bahoaka izy mba hisarihana ny saina amin'ny filà maika ny hisian'ny fitateram-bahoaka tsaratsara kokoa any Dar es Salam, ilay tanàna lehibe indrindra any Tanzania.
Bahanan'ny mpitandro filaminana hatrany hatrany ny làlanay hanao fanentanana ary tsy avelany mampiasa ny seranam-piaramanidina ny fiaramanidina ampiasainay amin'ny fanentanana. Tsy nomeny fahazoan-dàlana izahay mba hamory vahoaka ao amin'ny toerana izay namorian'ny CCM vahoaka andro vitsy lasa izay.
Farany, nambaran'ny governemanta tamin'ny voalohan'ny volana Septambra fa hanomboka hampihatra ilay ” lalàna fiarovana ny serasera amin'ny aterineto” manafoana ny fahazoana miteny malalaka ry zareo, izay mamadika ho heloka bevava ny fitsikerana ny governemanta amin'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy.
Na izany aza, raha ny fifidianana amin'ny ankapobeny no jerena, dia nomarihan’i Frank Charnas fa asehon'ny fifaninanana mialoha ny fifidianana fa manomboka ” zatra kokoa ny demokrasia” i Afrika. Nambarany ihany koa fa tsy amin'i Tanzania irery ihany no hiantraika ny voka-pifidianana :
Amin'ny ankapobeny, ilay fifidianana tanzaniana atao atsy ho atsy dia marika fa miha-zatra tsikelikely amin'ny demokrasia ilay tanibe, ary tsapa ny herin'ny mpanohitra miray sy mirindra. Mila ezaka iombonana ny fanongotana ny CCM, saingy toy ny ao ambadik'i Lowassa sy ireo mpiara-dia aminy hatrany ny hery hiroso sy ny fahavononana amin'ny fiandrasana ny fifidianana efa akaiky eo amin'ny tantaran'ny firenena. Azo antoka fa tsy ho an'i Tanzania irery ny vokatra azo eo fa ho an'ny faritra sy ny tanibe manontolo.
Tsy mahagaga fa hipoky ny fanehoankevitra sy fijery mifandraika amin'ny fifidianana ny Twitter :
Ity indray mandeha ity no tsy isalasalana fa fifidianana “ampiasàna teknolojia” indrindra teo amin'ny tantaran'i Tanzania, araka ny nosoratan'i Robert Kasenene :
Ireto fifidianana ireto no fifidianana ampiasàna teknolojia indrindra any #Tanzania. Fifidianana hisian'ny adin'ny drona fakàna sary avy eny an'habakabaka manomboka izao. Iza no handresy ?
Izao no hitan'i Merielaura raha niteny momba ny fanamelohana an'i Karim Wade, ilay zanaky ny Filoha Senegaly, noho ny kolikoly :
Afaka maimaim-poana amin'ny sazy eny fa na dia amin'ny fifaninanana amin'ny fifidianana aza ireo mpanao politika mpanao kolikoly.
Ilay Tanzaniana mpitoraka bilaogy, Jeff Msangi, dia nihevitra fa “lalao anaty akata” ny fifidianana amin'ity taona ity:
Mizotra miandalana mankany amin'ny lalao “anaty akata” ny fifidianana 2015 any Tanzania. Izay mahay milalao no mahazo ny toerana tsara.
Ny sasany kosa nanamarika ny fitombon'ny fandraisana anjaran'ireo tanora ao an-toerana amin'ny politika :
Izay mahazo ny vaton'ny tanora amin'ny fifidianana any #Tanzania amin'ny Oktobra no handresy
Nolazain'i Straight Talk Africa fa avo lenta ny fahatsiarovantena ara-politika tamin'ity indray mitoraka ity :
RT @saidimsonga: Miandrandra hahita fifidianana tena ho henjana ara-tantara aty Tanzania izahay. Avo lenta ny fahatsiarovantena raha oharina amin'ireo fifidianana tany aloha.
Fa iza no homen-tsiny raha toa ka resy ny antoko eo amin'ny fitondrana ? Maro no mihevitra hoe ny Filoha am-perinasa Jakaya Kikwete:
Raha manamontsana an'i @MagufuliJP i @ELowassa amin'io fifidianana ho avy any Tanzania io, dia mivantana tsotra izao any amin'i @jmkikwete ny fanomezan-tsiny, lova navelan'ny fitokana-monina, saritaka,
Izao no voalohany nahitan'i Penny Kims hoe natahotra ny antoko eo amin'ny fitondrana :
Hatramin'ny fahaleovantena dia izao no sambany nahitako ny antoko eo amin'ny fitondrana (CCM) matahotra ny ho resy amin'ny fifidianana…#2015election #Tanzania
Nanolo-kevitra ireo mpifidy i Barak Bob sy i Penny Kims :
Mba hananana safidy tsara amin'ny fifidianana #Tanzania amin'ny Oktobra dia ireo mpifaninana roa tsara naoty indrindra no isafidiano ary fakafakao ny toetrany @jmkikwete
Ny fifidianana no mamaritra izay ho eo amin'ny fitondrana, saingy tsy ny fifidianana no mamaritra ny fomba fampiasana ny fahefana….Tandremo iza no ho fidianao amin'ny #Tanzania #Uchaguzi2015
Manjaka ny kolikoly amin'ny fanentanana mialoha ny fifidianana :
Manjaka ny kolikoly amin'ny fanentanana amin'ny fifidianana #Tanzania Oktobra – lafy tsara na dia madio tànana aza ireo mpifaninana vitsivitsy. #Africa
Niteraka ny ‘democrazy’ (demokrazy, hadalàna faobe) ny fisintahan'ireo olona ambony araka ny bitsika iray :
#Tanzaniaelections Ny CCM-CCM ve no handresy sa ny CCM-CHADEMA ? Tongasoa ry demokrazy
Te-hahita ny antoko eo amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra hanangana governemanta iarahana i Ma Mary :
Tokony hiteraka ny governemantan'ny firaisam-pirenena, fa tsy fizarana noho ny fiarahana ara-paritra, ara-pirazanana sy ara-poko ny fifidianana amin'ny 25 Oktobra 2015 eto Tanzania
Moa ve ho fanovàna indray ny tantara politika Tanzaniana sy Afrikana izany ?